Global Voices teny Malagasy » Ao Anatin’ny Fibodoan’ireo Mpianatra ‘New University’ Ao Amsterdam · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Avrily 2015 20:27 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Tantely
Sokajy: Eoropa Andrefana, Holandy, Fanabeazana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna, Ny Tetezana - The Bridge
Avy tamin'ireo mpanao gazety sy mpaka sary Roberto Pizzato  sy Nicola Zolin .
Hita manerana an'i Eorôpa ireo onjanà hetsika anà mpianatra sy fibodoana ireo tranoben'ny anjerimanontolo. Any Amsterdam, ny 25 Marsta 2015, nanamarika ny volana voalohan'ny fibodoana ny Maagdenhuis , tranobe fanaovana ny raharaham-pitantanan'ny anjerimanontolon'i Amsterdam (UvA), izay ao Spui ao afovoan'ny tanàn-dehibe, ny hetsika Nieuwe Universiteit  (Anjerimanontolo Vaovao).
Hatramin'ny 11 Aprily, fony izy ireo noroahan'ny mpitandro filaminana mpandrava korontana , nibodo ilay tranobe ny vondron'ireo mpianatra, nikarakara hetsika karazany maro toy ny fivoriana, atrikasa sy fampahafantarana ary notohanan'ireo manam-pahaizana eo an-toerana sy any ivelany. Mangataka ny hisian'ny demôkrasia mivantana ireo mpianatra, ny fandraisana anjara amin'ireo fizotry ny fitantanana ny anjerimanontolo, ary ny fanajanonana ny fampidinana ny fanampiana ara-bola sy ny fanovàna tsikelikely ny anjerimanontolo ho lasa toy ny orinasa.
Ny 13 Febroary, ho valin'ireo fanovàna nolazain'ny UvA, nibodo ny tranobe Bungehuis  ireo eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo mpianatra ao amin'ny Nieuwe Universiteit. Taorian'ny tsy fahombiazan'ny fifampiraharahàna niaraka tamin'ny Filankevitry ny Fitantanana, noroahan'ireo mpitandro filaminana  ireo mpibodo, izay tsy nety niala tao amin'ilay tranobe. Ny alin'iny ihany, nisy vondrona mpianatra nanapitsoka ny varavaran'ny Maagdenhuis , tranobe ivon'ny fitantanan'ny UvA, ary nanomboka ny fibodoana izay nitohy hatramin'ny 11 Aprily .
Tamin'io volana voalohan'ireo hetsika tao amin'ny Maagdenhuis io, nampiantrano atrikasa ny mpanao fihetsiketsehana, nandefa horonantsary lava sy fanadihadiana, nanao kaonseritra mozika ary fivoriana matetika miaraka amin'ireo mpampianatra sy ireo manampahaizana toy ilay Amerikana mpikatroka mafana fo David Graeber , olona malaza mpitarika ny Hetsika  “Occupy” (Bodoy).
Nitondra fahatokisana ho an'ireo mpianatra ao Amsterdam ireo vaovaon'ny fibodoana ny tranobe fanaovana ny raharaham-pitantanana ao amin'ny London School of Economics (LSE) (Fianarana ny Toekarena) ao Londona ny 18 Marsta . Satria niteny  ny mpisolo tena ny hetsika fibodoana LSE hoe: “ny herin'ireo hetsika fibodoana dia noho izy mahatonga vokany sahala amin'ny daomy alahatra: vao fanombohany fotsiny io.”
Vao herinandro vitsivitsy lasa izay tao Canada, nanomboka fitokonana tao amin'ny Anjerimanontolon'i New York sy ny Anjerimanontolon'i Toronto  ireo mpianatra, mitaraina ny tsy fahampiana sy tsy fitovian'ny fanampiana ara-bola ho an'ireo mpampianatra mpiandraikitra ny fampianarana sy ireo mpampianatra mpanampy.
Amin'izao fotoanan'ny fibodoana izao, mino ireo mpianatra ao Amsterdam fa ho henoina ny fangatahan ‘izy ireo. “Iray amin'ireo fangatahana ireo ny fanajanonana ny fitànana ireo vola izay tokony hampiasaina amin'ny fikarohana sy fampianarana,” hoy i Joyce Pijnenburg, mpianatra fahiny tao amin'ny UvA, izay niala tamin'ny asany tao amin'ny anjerimanontolo noho ny tsy fandehan'ny asa izay ampangainy ankehitriny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/29/69208/
 Roberto Pizzato: https://twitter.com/robertopizzato
 Nicola Zolin: http://www.nicolazolin.it
 fibodoana ny Maagdenhuis: http://en.wikipedia.org/wiki/Bungehuis_and_Maagdenhuis_Occupations#Maagdenhuis_Occupation
 Nieuwe Universiteit: https://globalvoicesonline.org/2015/02/28/students-in-amsterdam-form-the-new-university-demanding-reforms/
 noroahan'ny mpitandro filaminana mpandrava korontana: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/04/amsterdam-students-sit-in-ended/
 nibodo ny tranobe Bungehuis: https://www.youtube.com/watch?v=BmorQDyI7vU
 noroahan'ireo mpitandro filaminana: https://www.youtube.com/watch?v=Ef3hJFo0I5k
 nanapitsoka ny varavaran'ny Maagdenhuis: https://www.youtube.com/watch?v=4R4A-8BpX-0
 David Graeber: https://www.youtube.com/watch?v=3ruS17ivinU
 olona malaza mpitarika ny Hetsika: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Graeber
 fibodoana ny tranobe fanaovana ny raharaham-pitantanana ao amin'ny London School of Economics (LSE) (Fianarana ny Toekarena) ao Londona ny 18 Marsta: http://www.theguardian.com/education/2015/mar/18/lse-students-occupation-protest-educationhttp://www.theguardian.com/education/2015/mar/18/lse-students-occupation-protest-education
 amin'ny Anjerimanontolon'i New York sy ny Anjerimanontolon'i Toronto: http://globalnews.ca/news/1888893/student-walkout-planned-at-university-of-toronto-amid-ongoing-strike/